१६ नेपाली परिकारसहित लन्डनमा रेस्टुरेन्ट खोल्दै मास्टरसेफ सन्तोष साह :: सुदीप श्रेष्ठ :: Setopati
मास्टरसेफ साहले भने- मेरो परिचयबाट इन्डियन ट्याग हटेको छ, अब फेरि त्यसमा फर्किन चाहन्नँ
लन्डनमा नेपाली परिकार पकाएर चखाउँदै मास्टरसेफ सन्तोष साह। तस्बिरः सन्तोष साह
मास्टरसेफ सन्तोष साहले बुधबार दिउँसो ३ बजेर ११ मिनेट जाँदा लन्डनको इल्थामबाट एउटा ट्वीट गरे, 'अहिलेसम्म इन्डियन सेफ भएर बाँचेँ। अब नेपाली सेफ हुँ भनी गर्व गरेर मर्न पाऊँ– अन्तर्राष्ट्रिय सेफ दिवसको शुभकामना!'
मलाई चाहिँ त्यो ट्वीट पढेपछि सन्तोष साहले किन त्यस्तो भने होलान् भन्ने लाग्यो।
उनी गत वर्ष फागुनमा काठमाडौं आएका बेला म उनीसँग एउटा रैथाने फूड टूरमा सामेल भएको थिएँ। भित्री काठमाडौंका नरदेवी, असन, इन्द्रचोक, मरू घुम्दै हामीले यहाँका विभिन्न नेवार परिकार चाखेका थियौं। उक्त फूड टूरबारे पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्ः मास्टरसेफ सन्तोष साहसँग काठमाडौंको फूड टूर।
उक्त भेटमा उनले मसँग भनेका थिए, 'काठमाडौं पाककलामा धनी छ। यहाँ थुप्रै रैथाने परिकार छन्। म यहाँका नेवारहरूसँग त्यसको ठेट तरिका सिक्न चाहन्छु र ती सबै संकलन गरेर किताब निकाल्छु।'
उनले यो पनि भनेका थिए, 'म नेपाली रैथाने परिकारहरू संकलन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन चाहन्छु। म अहिले ती परिकारको मेनुमा काम गर्दैछु। जसै मेनु तयार होला, लन्डनमा सबैथरिका नेपाली परिकार पाइने एउटा भव्य नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्ने मेरो योजना छ। लन्डनको सपना पूरा भएपछि म त्यस्तै रेस्टुरेन्ट यहाँ काठमाडौंमा पनि खोल्छु।'
सन्तोष साहले आठ महिनाअघि भनेका कुरा र उनले एक दिनअघि ट्वीटमा व्यक्त गरेका धारणा दाँजेर हेर्दा मलाई दुवै एकअर्कासँग सम्बन्धित छ कि भन्ने लाग्यो। तीनवटा प्रश्न पनि मनमा उठे–
पहिलो, सन्तोषले अघिल्लोचोटि काठमाडौं लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँ घुमेर यहाँका रैथाने परिकारको मेनु तयार पार्न थालेका थिए, उनको त्यो तयारी कहाँ पुग्यो?
दोस्रो, लन्डनमा नेपाली परिकारहरू पाइने नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्ने उनको योजना के भयो?
र तेस्रो, उनले ट्वीटमा किन लेखे– म अहिलेसम्म इन्डियन सेफ भएर बाँचेँ, अब नेपाली सेफ हुँ भनी गर्व गरेर मर्न पाऊँ।
यी तीनवटा प्रश्न उठेपछि मैले ह्वाट्सएपमा सन्तोष साहलाई मेसेज पठाएँ र आफ्ना जिज्ञासा राखेँ। मेसेज पठाएको पन्ध्र मिनेट नबित्दै उनले आफू कुराकानी गर्न तयार भएको जवाफ पठाए र केही बेरमा ह्वाट्सएपमै फोन पनि गरे।
मैले तेस्रो प्रश्नबाट कुराकानी सुरू गरेँ र सोधेँ, 'तपाईंले त्यसो भन्नुको आसय के हो?'
जवाफमा उनले भने, 'मैले सेफ काम गर्न थालेको २० वर्ष भयो। बीस वर्षदेखि लन्डनका विभिन्न इन्डियन रेस्टुरेन्टमा विभिन्न थरीका इन्डियन परिकारहरू पकाएँ। चिकेन टिक्का पकाएँ, बिरयानी पकाएँ। तन्दुरी पकाएँ, कबाब पकाएँ। मैले पकाउने खाना र म मान्छे जस्तो छु, मेरो हाउभाउ र बोलीचाली हेरेर पनि धेरैले मलाई इन्डियन सेफ नै भन्ठान्थे। निकै कम मान्छे थिए होलान् जो मलाई नेपाली भनेर चिन्थे।'
उनले अगाडि भने, 'धेरैलाई म नेपाली नलाग्नुको एउटा कारण त यहाँका रेस्टुरेन्टहरूमा नेपाली सेफको अस्तित्व नदेखेर पनि होला। लन्डनमा जति धेरै इन्डियन रेस्टुरेन्ट छन्, त्यसको दाँजोमा नेपाली रेस्टुरेन्ट निकै कम छ। इन्डियन परिकारहरू खानलाई यहाँ रेस्टुरेन्टको कमी छैन तर नेपाली परिकार खान मन लाग्यो भने तपाईं सितिमिति फेला पार्नुहुन्न। त्यसमाथि नेपालका ठेट रैथाने परिकारहरू त पाइँदै पाइँदैन भन्दा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले पकाउने खानाहरू हेरेर र म आफैंलाई पनि हेरेर धेरैलाई यो मान्छे त इन्डियन होला भनेर लाग्नु स्वाभाविक हो। म अब यो परिचय बदल्न चाहन्छु।'
सन्तोषलाई गत वर्ष बिबिसी मास्टरसेफ च्यालेन्जमा भाग लिनुअघिसम्म पनि धेरैले इन्डियन सेफकै रूपमा चिन्दा रहेछन्। उक्त प्रतियोगितामा नेपाली सेफका रूपमा प्रवेश गरेपछि र त्यहाँ यःमरि, गुन्द्रुक, भटमास, आलुको अचार लगायत नेपाली परिकार बनाएपछि बल्ल आफ्नो परिचयबाट 'इन्डियन ट्याग' हटेको उनी बताउँछन्।
बिबिसी मास्टरसेफ च्यालेन्जले बीस वर्षदेखिको आफ्नो परिचय एकै झट्कामा फेरेको उनको भनाइ छ।
'मलाई आफ्नो परिचयसँग जोडिएको इन्डियन ट्याग मेट्न बीस वर्ष लाग्यो। अहिले आएर बल्ल मलाई 'ए यो त नेपाली सेफ पो रहेछ' भनेर मान्छेहरूले चिन्न थालेका छन्। उनीहरूले यसो भनेको सुन्दा मलाई आफ्नो नेपाली परिचय फिर्ता पाएझैं भइरहेको छ। नेपाली सेफको यो नयाँ परिचयले मेरो करिअर नै नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको अनुभव भइरहेको छ। म अब आफ्नो करिअर यही परिचयका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छु,' उनले भने।
नेपाली सेफका रूपमा चिनिएपछि आफू धेरै नेपालीहरूको निम्ति 'रोलमोडल' बनेको पनि उनले बताए।
बीस वर्षअघि आफूले सेफको काम सुरू गर्दा कुनै पनि नेपाली व्यक्तिलाई रोलमोडल बनाउन नपाएको सम्झँदै उनले भने, 'अहिले धेरै नेपाली भाइबहिनीले मलाई आफ्नो रोलमोडल मान्न थालेका छन्। उनीहरू मलाई इमेल लेख्छन्, सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया पठाउँछन् र कतिले त फोन पनि गर्छन्। ती सबै जना मेरो कामबाट सिक्न चाहन्छन् र प्रेरणा लिन चाहन्छन्।'
सन्तोषले यो पनि भने, 'उनीहरूको निम्ति प्रेरणा बन्न पाउँदा मलाई गौरव लागिरहेको छ र अर्कातिर जिम्मेवारीबोध पनि भइरहेको छ। उनीहरूले मप्रति देखाएको विश्वास कायम राख्नुपर्ने चुनौती पनि छ। मैले अब गलत काम गर्नु हुँदैन। उनीहरूको विश्वास डगमगाउन दिनु हुँदैन। यसको निम्ति मैले आगामी दिनहरूमा आफूलाई नेपाली सेफकै रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।'
यसरी आफ्नो ट्वीटको आसय प्रस्ट पारेपछि सन्तोषले नेपाली सेफका रूपमा आफ्नो कार्ययोजना सुनाए।
उनले पछिल्लो नेपाल भ्रमणपछि १६ थरीका नेपाली परिकारको मेनु तयार पारेका छन् जसलाई समेटेर लन्डनको मेफेयर भन्ने ठाउँमा नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्ने योजना अघि बढाएका छन्। अर्को वर्ष जनवरीभित्र लन्डनमा नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्ने उनले बताए।
'मैले खोल्ने रेस्टुरेन्टमा नेपाली परिकारहरू मात्र पाइनेछन्,' उनले भने, 'म अब भारतीय परिकार बनाउने छैन। बीस वर्ष चिकेन टिक्का, बिरयानी, तन्दुरी, कबाब बनाएर बिताएँ, अब म नेपाली परिकार मात्र बनाउँछु।'
ती १६ थरीका नेपाली परिकारको मेनु लिएर उनी लन्डनभित्र फूड टूर पनि गरिरहेका छन्। विभिन्न रेस्टुरेन्टमा ती परिकार पकाउँदै र विदेशीहरूलाई स्वाद चखाउँदै हिँडिरहेका छन्।
यति मात्र होइन, बिबिसी मास्टरसेफ च्यालेन्जको आगामी संस्करणमा पनि भाग लिँदैछन्। उक्त प्रतियोगितामा अघिल्ला दुई वर्षका अन्तिम प्रतिस्पर्धीहरूलाई स्वतः सहभागी गराउने नियम रहेको जानकारी दिँदै उनले भने, 'आगामी डिसेम्बरमा हुने नयाँ संस्करणको मास्टरसेफ च्यालेन्जमा म फेरि आउँदैछु। त्यसमा नयाँ खालका नेपाली परिकार पकाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने विचार छ।'
मास्टरसेफ च्यालेन्जको नयाँ संस्करण र लन्डनमा नेपाली रेस्टुरेन्ट खोल्ने योजना पूरा गरेपछि अर्को वर्ष फेब्रुअरी वा मार्चमा फेरि नेपाल आउने तयारीमा रहेको उनले बताए।
'नेपालका विभिन्न ठाउँ घुमेर रैथाने नेपाली परिकारहरूको विस्तृत मेनु तयार पार्ने मेरो योजना पूरा भइसकेको छैन। मैले अझै धेरै ठाउँ जान बाँकी छ, अझै धेरै रैथाने परिकारबारे अध्ययन गर्न बाँकी छ। अर्को वर्ष नेपाल आउँदा म आफ्नो पाक अध्ययनलाई निरन्तरता दिनेछु। त्यसबाट जति पनि नयाँ नेपाली मेनु बन्नेछ, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लिएर जानेछु,' उनले भने।
यसबीच नेपाली परिकारहरूको मेनु र कथा समेटिएको उनको किताब पनि आउँदैछ।
'मेरो अन्तिम इच्छा चाहिँ नेपालका थुप्रै रैथाने परिकार पाइने एउटा ठेट नेपाली रेस्टुरेन्ट काठमाडौंमै खोल्ने हो,' उनले भने, 'लन्डनमा रेस्टुरेन्ट खोलेपछि म काठमाडौंको योजनामा काम गर्न थाल्छु।'
मास्टरसेफ सन्तोष साहले आफूले तयार पारेको १६ नेपाली मेनुको तस्बिर पनि ह्वाट्सएपमा पठाइदिए जुन यस्ता छन्ः
सबै तस्बिर स्रोत: सन्तोष साह
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कात्तिक ५, २०७८, ००:५८:००